Govecs GO! S1.2 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 70 ကီလိုမီတာ (25 km/h)
အဆိုပါကို GO! S1.2 ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ GOVECS GO! S1.2 တစ် silicium ဂျယ် accu နဲ့ high-performance ကို Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 50 သို့မဟုတ် 80cc Scooter များအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ S1.2 အနေနဲ့အဆင့်မြင့် brushless မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်မော်တာစွမ်းအားဖြင့်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခါးပတ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ် Scooter ကတော့ Scooter နီးပါးမျှဆူညံသံထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာသည့်ခေတ်မီ drive ကိုရထားရှိပါတယ်။ သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျအပိုင်းအခြားသို့မဟုတ်ပိုမြန်အရှိန်အကြားရှေးခယျြခဲ့နိုငျဒိုင်ခွက်တခုတခုအပေါ်မှာ "စီးပွားရေးကို switch ကို" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်စောင် 2013 | အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်